ध्रुवसत्य परियार - | Nagarik News - Nepal Republic Media
ध्रुवसत्य परियारका लेखहरु :
पुत्रको केशान्त संस्कार गरेको पहिलो रात तिमीहरूले उसका लागि जे चिताउँछौँ, त्यो पछि गएर पूरा हुनेछ। केशान्त संस्कार गरेको दिनको घाम डुबेपछि पुत्रलाई सफा कोठा वा पूजाकोठामा सुताउनू र भोेलिपल्टको घाम उदाउनु अघिसम्म कुनै शुभ चिताइसक्नू।
ध्रुवसत्य परियार ३ वैशाख २०७९ शनिबार १० मिनेट पाठ
यता शीलमञ्जु झसंग भए— मलाई सर्पले टोकिसक्यो, अब मेरो मृत्यु हुन्छ। अब मैले चुम्बन गरेँ, वा सम्भोग गरेँ भने मेरो शरीरमा भएको विष ज्ञानवतीको शरीरमा प्रवेश गर्छ। यही सोँचेर उनी पलङमा पल्टिएर निश्चल भए। पति केही नबोली पल्टेपछि ज्ञानवतीको मनमा चिसो पस्यो— अब यिनको मृत्यु हुने त होइन ! म एकैछिन निदाएँ, यो बीचमा के भयो?
ध्रुवसत्य परियार २६ चैत्र २०७८ शनिबार १४ मिनेट पाठ
राजेन्द्र लिङ्देनको ‘महाराज चिन्तन’
हिजो राजाको नजिक रहेर फाइदा लिने, धार्मिक र जातीय विरासतबाट सुविधा भोग्नेहरूलाई आज पुनः राजासहितको पुरानै प्रचलन र पद्धति चाहिएको छ। उनीहरूको चासो र चिन्तालाई महाराज शैलीमा आज राजेन्द्र लिङ्देनले सम्बोधन गर्दै छन्।
ध्रुवसत्य परियार १९ चैत्र २०७८ शनिबार १३ मिनेट पाठ
एकपटक गाउँबाट सदरमुकाम आउँदै गर्दा गाडीमा जय र ज्योतिको भेट भयो। कच्ची सडक थियो, महिन्द्रा जिपको छतमा उनीहरूसँगै बसेका थिए। घुम्तीमा गाडी हलचल हुँदा ज्योतिले जयलाई समाउँथिन्। वरपरका पहाड, पहाडको शिर र फेदीमा देखिने गाउँ–बस्तीले उनीहरूलाई प्रेमको बस्ती बसाउन उक्साउँथे।
ध्रुवसत्य परियार १२ चैत्र २०७८ शनिबार १५ मिनेट पाठ
मूर्ति रामको, छाया शम्बूकको? यो कस्तो दृष्टिभ्रम हो! म पागल भएँ कि मलाई कसैले छल गरिरहेको छ! कर्दवीरको मनमा अनेक तर्कना आए, तर उनले शब्दमा व्यक्त गरेनन्।
ध्रुवसत्य परियार ५ चैत्र २०७८ शनिबार ९ मिनेट पाठ
साधारण मानिसमाथि शासन गर्न शासकले केही भ्रमपूर्ण विश्वास फैलाउने गर्छन् र फैलाइरहनेछन्, जो पछि गएर अनुष्ठान बन्न सक्छन्। शासकले विशेष विधि वा तन्त्रमन्त्रको पनि सहारा लिनेछन् र मानिसलाई लामो समयसम्म सम्मोहनमा राख्नेछन्।
ध्रुवसत्य परियार २८ फाल्गुन २०७८ शनिबार १४ मिनेट पाठ
संसारमा अधिकांश मानिस अभावको भावको दर्शनलाई नबुझेर पीडित हुन्छन्, भ्रममा पर्छन्। अहिले हामीले मालीपिताको मूर्ति बनाएर उहाँको अभावको भावलाई मूर्त रुप दिन सक्छौँ, तर यो हाम्रो मनको सम्मोहन मात्रै हो। आखिर कसैलाई कुनै किसिमले मनमै राख्नु छ भने किन मूर्तिको सहारा लिनू? कतिपय अभावको भावलाई हामीले सीधै मनमा समेट्न सक्नुपर्छ।
ध्रुवसत्य परियार २१ फाल्गुन २०७८ शनिबार १३ मिनेट पाठ
जब माता शमना आएर मालीपिताको सेवाशुश्रूर्षा गर्न थालिन्, उन्मनालाई आभास हुन थाल्यो— कतै मालीपिता नै मेरा पिता होइनन् ? किन्तु यो कुरा उनले न मातासँग न मालीपितासँग सोध्नै सकिन्।
ध्रुवसत्य परियार १४ फाल्गुन २०७८ शनिबार १३ मिनेट पाठ
वैरोचनले प्रतिप्रश्न गरे:उन्मना ! दरबारमा स्त्रीलाई कसैकी पत्नी वा पुत्रीका नाममा चिनिन्छ। तिमी त्यहाँ जाने भयौ भने मेरी पत्नी वा प्रेमिका भएर जान्थ्यौ कि स्वतन्त्र गुरु भएर?
ध्रुवसत्य परियार ७ फाल्गुन २०७८ शनिबार ११ मिनेट पाठ
मातंगीपुरीलाई एक रजस्वला रेखाले घेरिएको छ। रजस्वलाको रगतलाई नै निधारमा तिलकका रूपमा लगाएर जाने पुरुषले त्यस रेखालाई नाघ्न सक्छ, नत्र रगतै छादेर पुरुषको मृत्यु हुन सक्छ। यो अत्यन्तै गोप्य ज्ञान हो, यसलाई गोप्य राख्नू।
ध्रुवसत्य परियार १५ माघ २०७८ शनिबार १५ मिनेट पाठ
मध्यरातमा शमना भगवती तटमा रुँदै थिइन् -सहसा भगवती नदीको गति रोकियो, यता उनको श्वास रोकियो, आँसु रोकियो, आवाज रोकियो, हृदयको धड्कन रोकियो तर हृदयमा असीम आनन्दानुभूतिको वर्षा हुन थाल्यो।
ध्रुवसत्य परियार ८ माघ २०७८ शनिबार १३ मिनेट पाठ
इतिहासका तीनवटा ‘१७’ र राज्यको क्षमायाचना
मानव इतिहासमा अधिकांश युद्ध राज्य र साम्राज्यकै लागि भए। इतिहासमा युद्ध अविवेकले मात्रै होइन, दासत्व स्वीकार नगर्ने विवेकपूर्ण निर्णयले पनि भए। राज्यको विस्तारलाई हामीले विवेकहीन बलियो बाघले आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गरेजस्तो ठान्छौँ।
ध्रुवसत्य परियार १ माघ २०७८ शनिबार ११ मिनेट पाठ
पृथ्वीनारायण, कांग्रेस, युवा र दयावाद
नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले ‘अखिल भारतीय’ शब्दको गणेशमान सिंहले विरोध गरेका थिए। गणेशमान आबद्ध ‘नेपाल प्रजा परिषद्’को ‘प्रजा’ शब्दको विरोध गर्नेहरू पनि थिए। नेपालीले आफूलाई ‘जनता’को रूपमा अघि सार्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको तर्क थियो। यसरी परिवर्तनका लागि धर्म र राजनीतिका शब्द, अर्थ र व्यवहारभित्र पसेर बहस भएका थिए।
ध्रुवसत्य परियार २४ पुस २०७८ शनिबार १३ मिनेट पाठ
असफल कविहरू कल्पनामा सुनौलो संसार निर्माण गर्छन् र भावुक स्त्रीहरूको शरीरमा काल्पनिक प्वाँख हालिदिएर काल्पनिक दुनियाँमै उडाउँछन्। यद्यपि एउटा कवि–लेखकका लागि यो ठूलो क्षमता र प्रतिभा हो।
ध्रुवसत्य परियार १७ पुस २०७८ शनिबार १६ मिनेट पाठ
हाम्रो कुनै आस्था, विश्वास र विधि हुनैपर्छ। तर, त्यो सामूहिकता, सार्वभौमिकता र सत्यमा आधारित हुनुपर्छ। आस्था र विश्वास विनाको मानिस घामतारा विनाको आकाशजस्तै हुन्छ।
ध्रुवसत्य परियार २५ मंसिर २०७८ शनिबार २० मिनेट पाठ
ध्रुवसत्य परियारका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्